Nwalee N’ime Ngwaọrụ dị mfe yana Adobe Onyogho | Martech Zone
Ọ bụrụ n’itinyela saịtị n’obere nchọgharị na kọmputa na mbadamba, ọ nwere ike ịbụ nrụgide ma na-eri oge. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ ewepụtala ngwaọrụ iji gosipụta nsụgharị na ngwaọrụ ndị ahụ, mana ọ bụchaghị otu ihe ịnwale ngwaọrụ ahụ n'onwe ha. Anọ m na-agụ Magazin Web Designer taa ma chọpụta na Adobe kwalitere agbọpụta, ngwaọrụ iji nyere ndị mmebe aka ijikọ ma rụọ ọrụ na ngwaọrụ ahụ n'oge.
Na ileba anya mbu, enweghị m mmasị na usoro mmekọrịta… onye na-eche ma m nwere ike ịpị saịtị ma gbanye ngwaọrụ niile ejikọtara na ibe ahụ. The n'ezie oké mma; Otú ọ dị, bụ ikike n'ezie na-ele na-achịkwa isi iyi nke ọ bụla ngwaahịa kpọmkwem na gị na desktọọpụ. Nke a ga - enyere onye mmebe ọ bụla nsogbu na mezue atụmatụ ha ka ọ dị mfe.
Maka ndị na-emepụta ihe na-etinye ụkpụrụ nzaghachi, nke a bara uru ọ bụla! Ntughari azịza na-adaba na nha nke ngwaọrụ gị kama ịtinye ihe nchọgharị ahụ na isiokwu ma ọ bụ usoro dị iche. Ha na-abụ ndị ama ama na ụlọ ọrụ ahụ. Iji nwetakwuo ihe ọmụma, ị nwere ike ịgụ isiokwu dị na Magazin Smashing na Imebe Web Web.
download Adobe Shadow maka Mac ma ọ bụ Windows. Ọ na-achọkwa Nchịkọta Google Chrome na ngwa metụtara maka ngwaọrụ gị ọ bụla.
Tags: Adobe ndonyocha nyochaNchọgharị ipadnyocha ipadmobile nchọgharịule nyocha ihe nyochanhazi mmeghachi omumeNjem Ileta Ụmụ Anụmanụmbadamba